IKHOWUDI YE-VS YOKWANDISWA KWESEVA EBUKHOMA: UNGASILAYISHA NJANI KWAKHONA ISIKHANGELI SAKHO? - IBHLOG
Ikhowudi ye-VS yokwandiswa kweseva ebukhoma: Ungasilayisha njani kwakhona isiKhangeli sakho?
Kule vidiyo, i-Live Server Extension ye-VS Code igutyungelwe ukuseta kunye nokumisela isikhangeli esihlaziya ngokuzenzekelayo.
Ikhowudi yeVenkile yeVenkile yenye yezona zihleli zithandwayo nezithandwayo zokufaka iikhowudi. Ndingumphuhlisi weWebhu yeFreendend kwaye ndisebenzisa iKhowudi yeVS buqu kwisitishi sam. Ngelixa ndikhowuda, abantu abaninzi babuza umbuzo oqhelekileyo othi, isikhangeli sihlaziywa njani ngokuzenzekelayo, ngaphandle kokucofa iqhosha lokuphinda ulayishe.
Oku kunokwenzeka ukuba uqwalasela ulwandiso oluhle kwiKhowudi yakho yeVS ebizwa ngokuba ngumncedisi ophilayo. Kule vidiyo, ndizicacisile iinkcukacha zayo kunye nendlela yokusetha kunye nokumisela iserver ebukhoma kumhleli weKhowudi yeVS.
indlela yokufaka ikhowudi kwintaka eflappy kwi python
Ikhowudi yokukhuphela iKhowudi yeVS: https://code.visualstudio.com/
Ngakumbi malunga neMicimbi yeServer Live: mfutshane.at/itAF2 mfutshane.at/mxFHL
Ikhowudi yeVenkile yeVidiyo yenye yezabahleli beekhowudi ezaziwa kakhulu phaya. Ikhululekile, ine-interface ecocekileyo, kwaye inezandiso ezingenakubalwa ezenza inkqubo ibe lula kwaye ibe mnandi.
Ndingumphuhlisi wewebhu wangaphambili kwaye ndisebenzisa iKhowudi yeVS ngelixa ndisebenza nakwisiteshi sam seYouTube. Ndinabantu abaninzi bendibuza ukuba isikhangeli sihlaziywa njani ngokuzenzekelayo ngelixa ndisenza iikhowudi, ngaphandle kokucofa iqhosha lokulayisha kwakhona.
Ewe oku kunokwenzeka ukuba uqwalasela ulwandiso oluluncedo kwiKhowudi yeVS ebizwa ngokuba yi-live-server. Kule posi, ndiza kuchaza iinkcukacha zendlela esebenza ngayo kunye nendlela yokusetha kunye nokumisela iserver ebukhoma kumhleli weKhowudi yeVS.
Kutheni le nto kufuneka ndisebenzise ulwandiso lweseva ephilayo?
Ngokwesiqhelo, xa usenza utshintsho kwikhowudi yakho okanye ubhala into entsha, kuya kufuneka uhlaziye iphepha ngesandla ukuze ubone utshintsho.
Ngamanye amagama, ukuba wenza iinguqu ezili-100 kwikhowudi yakho yonke imihla, kuya kufuneka uhlaziye isikhangeli amaxesha ali-100.
Ukongezwa kweseva ephilayo, nangona kunjalo, kuyenza ikulungiselele le nto. Emva kokuyifaka, i-automated localhost iya kuba nakho ukuqhuba kwisikhangeli sakho, onokuthi uqale ngaso ngeqhosha elinye.
uyithenga njani imali yesafemars
Nje ukuba wenze utshintsho kwikhowudi yakho okanye ubhale into entsha, emva kokuyigcina, isikhangeli siza kuzihlaziya ngokuzenzekelayo. Emva koko uya kuba nakho ukubona utshintsho ngokukhawuleza nangokuzenzekelayo.
Okokuqala, faka iKhowudi yeVS
Ungatsiba eli candelo ukuba sele ufake iVS Code kwikhompyuter yakho. Ngaphandle koko, unokuzikhuphela kwi iwebhusayithi yayo esemthethweni .
Ikhowudi yeVenkile ebonakalayo yeWebhusayithi esemthethweni
Emva kokuba ukhuphele kwaye ufake iKhowudi yeVS, uza kubona iscreen sokwamkela:
Kwicala lasekhohlo, kuya kufuneka ubone ii icon ezimbalwa. Enye yazo (phantsi kwe icon ye-bugs) ngamaqhosha okwandisa:
Nje ukuba ucofe kuyo kuya kuvela ibar yokukhangela. Chwetheza nje kwiserver ebukhoma.
Uza kubona ezininzi iindlela, ngoko unokukhetha nayiphi na into esebenzayo kwinkqubo yakho. Ndisebenzisa iServer ebukhoma nguRitwick Dey, ke masiqhubeke nalo mntu kulo mzekelo:
Cofa kwiqhosha lokufaka kwaye liza kufaka ulwandiso.
Yenza iphepha elitsha le-HTML
Ukuqala iseva ephilayo, qiniseka ukuba ubuncinci unalo iphepha elenziweyo le-HTML. Ukwenza oko, cofa kwiqhosha lefayile phezulu, emva koko ukhethe iqhosha elitsha lefayile kwaye uchwetheze index.html:
Icandelo lomfanekiso k lithetha
Icon entsha yeFayile enophawu oluDityanisiweyo (2nd ukusuka ngasekhohlo)
Ngoku emva kokuba wenze iphepha le-HTML kwaye ufake ulwandiso kuya kufuneka ukwazi ukubona i-Go Live icon kanye apha ngezantsi kwibala eliluhlaza:
Ukuba awuyiboni qala nje ikhowudi yeVS. Ke kufanelekile ukuba ilungile.
Cofa kwiqhosha le-Go Live kwaye i-localhost (eyabelwe inombolo yezibuko) kufuneka iqale kwisikhangeli sakho esingagqibekanga. Ungaqala kwaye umise iserver yakho nangaliphi na ixesha ngokunqakraza kwiqhosha elinye.
Ukongezwa kweseva ebukhoma yeKhowudi ye-VS kugutyungelwe ukuseta kunye nokumisela isikhombisi esihlaziya ngokuzenzekelayo. Ndiza kuchaza iinkcukacha zendlela esebenza ngayo kunye nendlela yokusetha kunye nokuqwalasela iserver ephilayo kumhleli weKhowudi yeVS.
avg ixesha lokuvavanya
ilifu likaGoogle leedummies
Ungasusa njani isitshixo sokwenene windows 10
ujonga njani i-numpy version
uyithenga phi imali yedogelon mars e-usa
i-gmail ayilayishi kwi-chrome